Ubuso obukhathele - Indlela yokuvalelisa ngamakhambi alula | Bezzia
USusana godoy | 11/05/2022 12:00 | Ubuhle
Ingabe unobuso obukhathele nsuku zonke? Bese kuyisikhathi sokuvalelisa ngokubheja kumathiphu angcono kakhulu. Kuyiqiniso ukuthi maningi okhilimu emakethe, futhi sizosebenzisa amanye, kodwa ngaphambi kwalokho, kufanelekile ukubheja ngoshintsho oluthile esimisweni sethu esizokwenza isikhumba sethu sibe ngcono kanye nakho lokho kukhathala esikushilo.
Ngezinye izikhathi akuwona nje amehlo kanye nalokho kukhukhumala okungase konakalise usuku lwethu. noma isonto. Kodwa futhi kuzoba yisikhumba esingabonakala ngaphandle kokukhanya kanye nemibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo esivimbela ukuba sishiye lowo mbala umnyama kangangokuthi usenza ukuthi ukukhathala kubonakale nakakhulu. Manje yisikhathi esiqondile sokuhlukana nakho konke lokhu. Thola!
1 Phumula ngokwengeziwe futhi kangcono
2 Yenza kusebenze ukujikeleza nge-massage
3 Ukubheja njalo nge-hydration
4 Iqhwa noma amanzi abandayo kakhulu ukuvalelisa ebusweni obukhathele
5 Ikhukhamba lamehlo
Phumula ngokwengeziwe futhi kangcono
Yebo, kulula ukukusho kodwa akulula kangako ukukwenza nsuku zonke. Ngoba izikhathi eziningi akuncikile kithi kuphela, nakuba sinokuningi okumelwe sikwenze. Sekuyisikhathi sokubamba ubuthongo, engiqinisekile ukuthi unabo. Zama ukulala imizuzu embalwa ngaphambi kwesikhathi nsuku zonke, ubeke eceleni umakhalekhukhwini wakho noma ezinye izinto ezisetshenziswayo isigamu sehora ngaphambi kokuba ulale, futhi ugeze eshaweni elishisayo.. Lezi ezinye izinyathelo ezingasiza ukuphumula umzimba futhi kanjalo, wenze u-Morpheus asivakashele. Ngoba kwezinye kukhona isisekelo sobuso kanye nesikhumba esikhazimulayo. Njengoba kungesikhathi sokulala lapho ukuvuselelwa kwamangqamuzana kwenzeka, kanye ne-oxygenation yayo. Kungabi ngalokho kuphela, kodwa nangomzimba wakho wonke, omemeza ngempela lokho kuphumula.
Yenza kusebenze ukujikeleza nge-massage
Ngama-massage, ngaphezu kokwenza kusebenze ukujikeleza, sizokwazi nokuphimisa futhi ususe imigqa yokukhuluma futhi uzuze umphumela wobusha nomusha wesikhumba sethu. Inazo zonke lezi zinzuzo nokunye okuningi, ngakho-ke kufanele ukuhlanganise nenqubo yakho yobuhle yansuku zonke. Ama-massages angenziwa ngeminwe futhi athathe ithuba lokusebenzisa uhlobo oluthile lwamafutha noma ukhilimu ukuze kube lula. Khumbula ukuthi zizoba yindilinga futhi zihlale zikhuphuka, ngoba yile ndlela esisebenzisa ngayo futhi sivalelisa imibimbi engase ivele.
Ukubheja njalo nge-hydration
I-hydration kufanele ibe khona njalo ezimpilweni zethu. Ngakolunye uhlangothi, sizoyisebenzisa ngaphandle ngenxa yokhilimu noma imaski. Ngoba ngale ndlela ubuso buzobonakala ngokukhanya okwengeziwe. Kodwa asinakukhohlwa ukuphuza amanzi anele nsuku zonke, njengoba isikhumba singabonisa inkinga ethile ngaphakathi. Ngakho-ke, ukuhlala u-hydrated noma u-hydrated kuhlale kungenye yezixazululo ezinhle kakhulu okufanele uzicabangele. Yiqiniso, uma unenkinga yokuphuza amanzi amaningi, ungakwazi njalo ukuzisiza nge-infusions, isibonelo, noma amanzi anelamula.
Iqhwa noma amanzi abandayo kakhulu ukuvalelisa ebusweni obukhathele
Ukuvalelisa ebusweni obukhathele kungenziwa futhi ngamakhambi asekhaya. Ngokuqinisekile usuyazi kakade iqhinga le-ice cube, okuthi, lapho lidlula Kuzothatha ukusebenza ngokushesha ngokuqinisa isikhumba futhi ushiye eceleni ukuvuvukala.. Ngendlela efanayo, ungakwazi futhi ukugeza ubuso bakho ngamanzi abandayo kakhulu, ngoba umphumela ufana kakhulu. Isebenza ukujikeleza, ivala ama-pores futhi ibuye yelule kancane ubuso. Yini enye esingayicela?
Amehlo ngokukhethekile kanye nemibuthano emnyama, maningi amakhambi asekhaya esingawathola. Kodwa ngaphandle kokungabaza, asanda kusikwa ikhukhamba tincetu futhi ukwazi ukuphumula imizuzu embalwa nabo, kungenye yezixazululo ezingcono kakhulu zokushiya ngemuva kobuso obukhathele. Ungabeka lonke ucezu phezu kwamehlo, njengoba sishilo, noma usike uhhafu ube yincele ukuze ubeke phezu kwemibuthano emnyama.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Indlela yokuvalelisa ebusweni obukhathele
Ukudla okunothe nge-ayoni ekudleni kwengane